नेपाली राजदूत शाक्यलाई इजरायलमा ‘एम्बेस्डर अफ इयर २०१९–२०’ सम्मान ! « GDP Nepal
Published On : 24 May, 2020 3:51 pm
काठमाडौं । एम्बेसेडर क्लब अफ इजरायलकले इजरायलको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा तेल अबिबस्थित नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यलाई ‘एम्बेस्डर अफ इयर २०१९–२०२०’ सम्मान गरेको छ ।
इजरायलको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा उनलाई वर्षको उत्कृष्ट राजदूतको रूपमा छनोट गरिएको हो । एम्बेसेडर क्लब अफ इजरायलका निर्देशक समितिले इजरायलमा रहेका ९० कुटनितिक नियोगहरु मध्येबाट नेपाल र इजरायलको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन योगदान गरेकोले शाक्यको पक्षमा मत जाहेर गरेको हुनाले सम्मान गने जनाएको छ ।
सम्मानका क्रममा अन्य तिन बिधामा पनि विभिन्न कुटनीतिज्ञलाई सम्मान गरिएको छ। सो अवसरमा कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, इजरायली अधिकारीहरू, राजदूत क्लबका सदस्यहरू र मिडियाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । उक्त अवार्डबाट सम्मानित हुने डा. शाक्य एशियाकै पहिलो राजदूत हुन् ।
नेपाल र इजरायलका चेम्बरबीच सम्झौता
नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कर्मस एन्ड इन्डष्ट्रिज (एनआईसिसिआई) र इजरायल एसीया चेम्बर अफ कर्मस (आईएसीसी) बिच सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा एनआईसीसीआइको तफबाट अध्यक्ष शिशिर भट्ट र आईएसीसी तर्पmबाट उपाअध्यक्ष अनात बर्नस्टेन रेचले हस्ताक्षर गरेका छन ।
इजरायल एसीया चेम्बर अफ कर्मस अन्तर्गत इजरायल नेपाल चेम्बर अफ कर्मसको अध्यक्षता अनात बर्नस्टेन रेचले गर्नेछन् । एनआईसीसीआई र आईएसीसी बिच लगानी, उद्योग, यातायात, पर्यटन, प्रविधिको हस्तान्तरण, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र पूर्वाधार लगायतका विभिन्न आर्थिक सहकार्य बृद्धि गर्न सम्झौता भएको हो । इजरायल स्थित नेपाली राजदूत डा. अन्जान शाक्यको समन्वयमा सो सम्झौता भएको हो ।
राजदूत शाक्यले दुई संस्था बिच सम्पन्न सम्झौताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशको आर्थिक विकासका सहकार्य गर्न अझ सहज भएको बताईन । सो अवसरमा राजदूत शाक्यले नेपाल र इजरायलका महिला उद्यमीको सशक्तिकरणमा काम गर्नु पर्ने कुरामा समेत जोड दिइन् ।
भर्चुअल सम्बाद गदै नेपाल इजरायल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष शिशिर भट्टले नेपाल र इजरायल बिच ६० वर्ष अघि शुरु भएको कुटनितिक सम्बन्धको स्मरण गदै यो सम्झौताले दुई देशको बिच ब्यापारिक तवरमा यातायात, कृषि, पुर्वाधार, जलविद्युत्, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा द्विपक्षिय सहयोग आदान प्रदान प्रदान हुने बताए ।
इजायल नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष अनात बर्नस्टेन रेचले नेपालको बित्तिय क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पाएकोमा खशी व्याक्त गदै आफनो तर्पmबाट आश्वयक सहयोग गर्ने बताए । सो अवसरमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले २ संस्था बिच भएको सम्झौतामा खुशी व्याक्त गदै नेपाल र इजरायलको आर्थिक विकासमा थप सहयोग आदान प्रदान हुने बताए ।
नेपाली टोली केही महिना अघि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न इजरायल जानु पर्ने तालिका भएपनि कोरोना संकटका कारण जान सकेको थिएन ।